Maxaa bartilmaameed ka dhigay Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud? | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Maxaa bartilmaameed ka dhigay Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud?
Maxaa bartilmaameed ka dhigay Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud?
Shirkadda isgaarsiineed ee dalka ugu weyn (Hormuud Telecom) ayaa muddooyinkii ugu dambeysay bartilmaameed u noqotay Ciidanka Militariga Kenya, ee qaybta ka ah Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, kana hawlgala Gobolada Jubbada Hoose & Gedo.
In muddaba waxaa Deegaanada Jubbaland laga soo warinayay burburinta ay Ciidanka Kenya ku hayaan Xarumaha Shirkadda Hormuud ku leedahay Gobolada Gedo & Jubbada Hoose. Weerarkii ugu dambeeyay ee xarun Hormuud leedahay lagu burburiyana waxaa ugu dambeysay middii maalmo ka hor ay Ciidanka Kenya ku burburiyeen Xaruntii Hormuud ee Deegaanka Jaldeyse ee Gobolka Jubbada Hoose.
Ciidanka Kenya marka ay burburinayan xarumaha isgaarsiineed ee shirkadan ayaa u adeegsan jiray madaafiic inay la dhacaan, balse burburintii Xaruntii Jaldeyse taasi way ka duwaneyd, iyagoo markaan u adeegsaday miinooyin ay hareeraha xaruntani ku aaseen. Qaraxyada ayaana dhulka la simay dhismihii xaruntaasi, sidoo kalena ay dhulka soo dhigeen toweradii wax xiriirin jiray qaarkood.
Saraakiisha Ciidamada Soomaalida ayaa kuu sheegaya in dhawr arrimood oo is biirsaday ay dhabaha u xaartay hawlgalada ka dhanka ah Xarumaha Shirkadda Hormuud, ay ku leedahay Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo.
Saraakiisha ayaa ku waramaya in Hormuud ay si hufan uga hawlgasho deegaanada xuduuda dhaca, dadka ku sugana xuduuda dhinaca Kenya ay si caadi ah u adeegsadaan adeegyada kala duwan ee Hormuud, xilli uu jiro tartan kala dhaxeeya Shirkadda Isgaarsiinta Safaricom ee dalka Kenya laga leeyahay.
Saraakiisha Militariga Kenya ayaa horey u sheegay in bartilmaameedyada ay maleeshiyada Al Shabaab ku hayaan Xarumaha Safaricom ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya, ay maalgeliso Shirkadda Hormuud.
Saraakiishan ayaa sidoo kale sheegay in Shabaabka weerarada ka gaysta Gobolka Waqooyi Bari, ay ku wada xiriiraan teleefanada gacanta, ee leh Simcard-ka Hormuud Telecom.
Arrintan ayaa waxaa la sheegay in dhawaan lagu soo hadalqaaday Shirka Golaha Wasiirada Kenya, xilli uu shir guddoominayay Madaxweyne Uhuru Kenyatta. Mr. Kenyatta ayaa maalmo ka hor Magaalada Nairobi ka sheegay inay dardar-gelinayan dagaalka ay ku soo afjarayan waxa uu ugu yeeray argagixisada Al Shabaab.
Aadan Faarax oo ka mid ah Waxgaradka Gobolka Gedo ayaa qaba inuu jiri karo tuhun keeni kara inay Hormuud u sababsatay bartilmaameedka, ay xilligan ka dhigtaan Ciidanka Militariga Kenya.
“Fiiri hal mid ayaan rabaa inaan idin fahamsiiyo, Ciidamada Kenya horta dalkan lagama jeclo, taa waa sax, dalkana waxay jooggaan sideed sano. Marka weerarada Hormuud lagu hayo goorma ayay bilowdeen? Waxay bilowdiin laba sano ka hor sax? Intii ka horeysay maxay Ciidamada Kenya u burburin waayeen xarumaha Hormuud, oo hadda loo burburinaya? Meeshaas waxbaa salag leh.” Ayuu yiri Aadan Faarax.
Faarax oo la hadlay Dhacdo.com ayaa yiri “Midda kale shirkado badan oo ganacsi ayaa joogga Jubbooyinka iyo Gedo-ba, maxaa Hormuud oo keliya loo weeraraa? In la is weydiiyaa la rabaa, Hormuud maxaa lagu haystaa? Iyagaa laga rabaa wixii ay Kenya ka tabanayso inay xal mastuur kala gaaraan. Dhibka meesha uu ka jiro ayagaa garanaya ee haka xaajoodaan.”
Inta la’ogyahay muddadii ay Ciidanka Kenya wadeen burburinta Xarumaha Hormuud Telecom ayaa waxaan jirin war rasmi ah oo ay ka soo saareen eedeymaha ka soo yeeray Kenya, ee ah inay maalgeliso Shabaabka burburinaya Xarumaha Safaricom.